Wayin Anotangisa Mheni Kurumidza Nhare dzeMagariro Nhau | Martech Zone
Wayin Anotangisa Mheni Fast Mobile Social Nhau
Chipiri, April 3, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Douglas Karr
Dhijitari kushambadzira yasvika padanho rekushomeka. 50% yevakuru vanodzivirira kushambadzira pane nharembozha uye desktop uye imwe 47% inodzivirira in-in ads. Aya ndiwo manhamba anotyaira Wayin chishandiso, Nhau Dzemagariro, chishandiso chakakosha chevashambadzi vemakambani nevashambadziri.
Nhasi, kana vashandisi vepa Instagram baya kana swipe kumusoro pane Yakatsigirwa Nhau, kazhinji zvinotora zvizere masekondi mashanu yeiyo webhusaiti webhusaiti kurodha mukati meapp. Vashandisi venhare vanoshaya moyo murefu, vanonetseka uye vanodzokera kuapp, uye mabhureki anotambura nepasi-pinda-uye nemitengo yekubatanidzwa.
Zvemagariro Nhau chishandiso chinobvumidza mabhenji kurodha zvakashambadza zvemukati mune rekodhi kumhanya uye natively mukati meapp, pane kunonoka kutora mushandisi kune webhusaiti webhusaiti. Kune zvigadzirwa, izvi zvinopa kubatanidzwa kwepamusoro uye shanduko panhare-kune-chiito mukati menyaya dzinotsigirwa.
Nhau Dzemagariro pakupedzisira dzinobvumidza zvigadzirwa kuti zvigadzirise zvakatsigirwa zvemukati pane Instagram uye Snapchat Nhau. Icho chishandiso chinowedzera ruzivo rwechigadzirwa mune rekodhi kumhanya, izvo zvinoita kuti zvinotsigirwa zvemukati zvive zvechokwadi inonyudza chiitiko kune vatengi. Kune zvigadzirwa, izvi zvinopa kubatanidzwa kwepamusoro uye shanduko panhare-kune-chiito mukati menyaya dzinotsigirwa.
Nhasi, kana mutengi akadzvanya kana kutsvaira pamusoro penyaya inotsigirwa, inovaendesa kune isina chinhu skrini iyo inowanzo kutora masekondi mashanu akazara kuti webhusaiti yewebhu itakure mukati meapp. Kunonoka kunokanganisa ruzivo rwevatengi nechiratidzo uye kazhinji kunosiya vatengi vakashungurudzika zvakakwana kuti vaende kune chimwe chinhu. Zvemagariro Nhau zvinogadzirisa izvi nekupa mheni-inokurumidza chiitiko iyo inogona kurodha ipapo zvigadzirwa zvemukati natively mukati mepuratifomu, ichigadzira musono mushandisi ruzivo. Richard Jones, CEO weWayin
Pamusoro pezvo, Nhau Dzemagariro dzakasimudzira kugona kuisa sweepstakes, quizzes uye nekukurumidza kuhwina ma mechanics muzvinyorwa, zvichibvumira mabrands kuunganidza yekutanga-bato PII dhata kune zvimwe zvakajairwa zviitiko, uye pakupedzisira, yakakwira tinya-kuburikidza nemitengo.
Demo Wayin Yemagariro Nhau
Tags: yekutanga data dataInstagraminstagram storiesnharembozhanharembozhanhare mbozha nyayaakabhadhara shambadzirorichard jonessnapchat nyayanyaya dzevanhunyaya yemagariroYakatsigirwa Nhauwayin